/ब्लग/Boldenone/Boldenone Undecylenate: 8 Equipoise साइड इफेक्ट्स तपाईं बचाउन चाहानुहुन्छ
प्रकाशित 04 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young मा लेखियो Boldenone.
Garcinia Boldenone Undecylenate को बारे मा सबै केहि
1। Equipoise के छ (Boldenone अज्ञात)
2। Equipoise (Boldenone Undecylenate) विशेषताहरू
4। Equipoise (Boldenone Undecylenate) Cycle and Dosage
5। 8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) साइड इफेक्ट्स तपाईबाट बच्न चाहानुहुन्छ
6। Equipoise (Boldenone Undecylenate) homebrew recipe
7। Boldenone Acetate & Boldenone Cypionate
8। Boldenone कहाँ प्राप्त गर्ने?
Equipoise के छ (Boldenone अज्ञात)
Equipoise(Boldenone अज्ञात) टेस्टोस्टेरोन एनाबोलिक-एन्ड्रोजन स्टेरॉयड (व्युत्पन्न छ)AAS) कि 1940s पछि बजार मा भएको छ। त्यहाँ Boldenone Cypionate, Boldenone एसीटेट सहित धेरै Boldenone अनुमान।
परिचय पछि, लैजानुसार मात्र पशुपक्षीहरूले प्रयोग गरे पछि 1950s जब Ciba यसको मानव ग्रेड हो। घोडाहरू घोडाहरूका लागि लुगाफार्मले आफ्नो भूख र साथमा दुबला मांसपेशिहरु ठूलो सुधार गर्न बोली विकास गर्यो।
शरीरको बिरुवाहरू जसले यसलाई प्रयोग गर्दछ यो नाटकीय थोक प्रभावबाट रोमाञ्चक थियो जुन यस स्टेरॉयड प्याक गरिएको छ। यसमा थप गर्न, यसले पानी अवधारणमा नतिजा नदिएको कारण यस बदसूरत प्रलोभनको लागी कुनै स्थान थिएन।
यो चिकित्सा क्षेत्रमा उपलब्ध थियो जब सम्म 1970s पछि यो फिर्ता लिइयो। दुर्लभ गम हुनु, यो केवल पशु चिकित्सकहरु र केहि मार्केटहरू मार्फत उपलब्ध छ। यसमा केहि व्यापार नामहरू छन् जसमा बोल्ड-एक, बोल्डोजेक, बोल्डेन, बोल्डेबोलिन, इक्विगन, र इक्वेइडक्स पनि छन्।
Equipoise (Boldenone Undecylenate) विशेषताहरू
बडा बङ्गलादेशहरूको अधिकांश तुलना गर्न प्रयास गर्दै छन् deca र Equipoise। दुवै स्टेरियोड्स मांसपेशियों को मासिक को रूप मा र शरीर को शक्ति को लाभ मा अवधारण मा अंतिम नै हुन्छ। तिनीहरू दुवै यो प्रोटीन संश्लेषण को वृद्धि को माध्यम ले यो प्राप्त। एक फरक छ कि डेका प्रयोगकर्ताहरूले यसको कारणले गर्दा अतिरिक्त एस्ट्रोजनको कारण कडा पोस्ट चक्र थेरेपी पछ्याउनु पर्छ।
केही औषधीहरु जुन बडिबिल्डरहरूले पीटीसीको लागि प्रयोग गर्छन् नोल्भ्याडेक्स, Clomid, र Arimidex। यो धेरै फिटनेस गुरुङ्ग Equipoise प्रयोग गरेर विचार गर्ने एक कारण हो। डेक्काको साथ अर्को मुद्दा यो छ कि त्यो एकदम समयको लागि एक प्रणालीमा रहन्छ। किनकि यसले तपाईंको शरीरमा लगभग दुई वर्षको लागि सकारात्मक जाँच गर्न सक्छ, परीक्षामा लिने एथलीटहरूले नियमित रूपले इक्विप प्रयोग गर्न मनपर्छ। Equipoise पहिचान समय लगभग5महिना हो।
जब डिजा साइड इफेक्ट बनाउँदा बोल्डेनोन अन्डेलेनेनेट साइड इफेक्टमा आउँछ, उपकरणको दिन दिन हुन्छ। इक्विपोज़र इरोजेनिक साइड इफेक्ट जस्तै ऐन, अनुहारको कपाल, र कपाल हानि गर्दा डेरा प्रायः द्रव प्रतिधारण र जिनेकोमास्टियासँग जोडिएको हुन्छ।
डेका ती थोकहरूको लागि उत्कृष्ट छनौट हो जसले बल्क देख्दा प्रायजसो प्रायः चक्र चापमा प्रयोग गरिन्छ। कुनै आश्चर्य छैन कि अधिकांश मानिसहरूले बोल्डेननको काटन प्रयोग गर्न मन पराउँछन् किनकी यो उत्तम परिणाम प्रदान गर्दछ।
यसलाई सब गर्न को लागी, Equipoise सबै भन्दा ठूलो प्यारो हुन्छ तर धीमी तर स्थिर लाभले गर्दा यो एस्ट्रोजेनिक दुष्प्रभावको पीडाको समस्या बिना तपाईंलाई मांसपेशी बल र जनको सन्दर्भमा प्रदान गर्दछ। यो लामो चक्रको अंश पनि हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, इक्विपोज़ बिरालो डेराले ह्यान्ड्सलाई हटाउँछ जब यो रातो रगत सेल उत्पादनको बढावा र भूखको उत्तेजना हुन्छ।
Equipoise Vs टेस्टोस्टेरोन
Boldenone Undecylenate शेयर केहि समानताहरु टेस्टोस्टेरोन संग जब यो ठूलो वृद्धि को लागि आउछ। दुवै स्टेरियोड्स ठूला विजेता हुन् र क्षमता पाईन्छ:
नाइट्रोजन अवधारण मांसपेशियों को विकास को वाहेक यसको अवधारण को कारण हुन्छ।
ग्लेकोकोर्टिकोइड हार्मोनको संख्या घटाउनुहोस्
रोकथाम ग्लुकोकोर्टिकोइडले प्रोटीनलाई अटिनो एसिड जस्ता साना घटकहरूमा ब्रेक लगाउछ। यसको मतलब यो हो कि टेस्टोस्टेरोन र लैजानुसार दुवै चयापचय को catabolic चरण को कम गर्न सक्छ।
ग्लेकोकोर्टिकोइड हार्मोनमा कमीको साथ, कसरत पछि तपाईंको कसमको म्याद ठीक गर्न कम समयको मात्रा कम हुन्छ।
IGF-1 निर्गत बढाउनुहोस्
इन्सुलिन-जस्तै विकास कारक 1 (IGF-1) ले सम्पूर्ण शरीरमा पुन: उत्पादन र पुनरुत्थान गर्न मद्दत गर्दछ। नतीजा, ठूलो मांसपेशियों को निर्माण र मांसपेशियों को बर्बाद को रोकथाम छ। Equipoise र टेस्टोस्टेरोन आईजीएफ-1 को उत्पादन बढाने मा जो बारी मा शरीर सौष्ठव को बढावा गर्दछ।
प्रोटीन संश्लेषण बढाउनुहोस्
प्रोटीन बेशक एक शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक मध्ये एक हो। तिनीहरू के हुन् शरीरले बढ्छ वा परिवर्तन गर्दछ। जब शरीर मा अधिक प्रोटीन संश्लेषण हुन्छ, त्यहाँ मांसपेशियों को विकास र ऊतक को मरम्मत हो। नतिजाको रूपमा, कसैले कठिन र लामो समयसम्म प्रशिक्षित गर्न सक्दछ।
राम्रो ऊतक मरम्मत भनेको हो कि एक पटक तपाईंले प्रयोग गर्नुभन्दा भन्दा ठूलो वजन लिन्छ; तपाईं छिटो पुनःप्राप्ति गर्नुहुनेछ किनभने मरम्मत प्रक्रिया अझ राम्रो हुनेछ।
Boldenone undecylenate प्रयोग को प्रभावs बिजुली निर्माणमा
जिममा तपाईंको सबै प्रयासहरूमा बाधा लगाउन, के यो अहिलेसम्म राखिएको छैन? यो निराश हुन सक्छ कि जिममा धेरै गाह्रो काम गरिसकेपछि, तपाईंले अझै आफ्नो मांसपेशीमा कुनै पाउन्ड थप्नु भएको छैन। यदि तपाईं सधैं केहि कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई छिटो, सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि म तिमीलाई गोप्य भन्नेछु।
तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ कि बोल्डेनन अज्ञात को लागि प्रयोग गरिन्छ? त्यसोभए तपाईंले ब्लेकनेन अपरिभाषित परिणामहरूमा बल्क प्रभाव देखाउनुभएको छैन। यद्यपि यो केहि समय लाग्दछ, यो स्टेरॉइडले एकदम दुबला मांसपेशी जनलाई अचम्मको फाइदा दिन्छ। Boldenone vs बनाम डेका Durabolin वा तुलना गर्दै Anadrol, boldenone परिणामहरू छिटो हुने छैन।
यसको फायदा यो हो कि लाभहरू लामो समयसम्म चल्ने छन् र पानी अवधारणको परिणामको रूपमा होइन। त्यसैले यदि तपाईं राम्रो हेर्न चाहानुहुन्छ र शहरको कुरा गर्न चाहानुहुन्छ भने, बोल्डेनन अज्ञात जाने बाटो हो।
तपाईं शायद जान्नुहुन्छ कि तपाई आफ्नो मांसपेशिहरु लाई बढ्न सक्दैन यदि तपाईं पर्याप्त भइ रहेको छैन। एक घर जस्तै पर्याप्त पर्याप्त कच्चा माल चाहिन्छ, मांसपेशियों को आकार मा बढ्न को लागि कृतज्ञता मा कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, र प्रोटीन को आवश्यकता हो। दुर्भाग्यवश, सबै भन्दा बडिबिल्डरहरूले कसरी यो गर्न सक्दैनन्।
कहिलेकाँही कम्तिमा एक हजार अतिरिक्त क्यालोराहरू बढी मांसपेशीहरू प्याक गर्नका लागि एक बिल्डर बिल्डर सिफारिस गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ यो पनि बढी हुन सक्छ।
त्यो सबैको लागि खाना धेरै धेरै छ, र धेरै मान्छे त्यो पनि आधे खपत गर्न पनि यो सजिलो पाउन सक्छ। तपाईं केवल अधिक क्यालोरीहरू खरिद गर्ने लक्ष्य हुन सक्नु भएको छ कि तपाईले आफ्नो मांसपेशीको आकारमा परिवर्तन नगर्न अघि पछाडि हटाउनुभयो। सुसमाचार यो हो कि बडिडोनोन को एक बडी बहाली मा प्रयोग गर्दछ को प्रभावी ढंग देखि कम भूख देखि निपटने को लागि यसैले तपाईंको शरीर को लक्ष्यहरु लाई प्राप्त गर्न मा मदद गर्दछ।
दायाँ बोल्डेनन अज्ञात खुराक संग, तपाईं सम्भावनामा तपाईंको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको लागी सम्भव छ भूख। नतिजाको रूपमा, तपाईले चाहानु भएको जस्तो धेरै कैलोरी र प्रोटीन खपत गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कार्ब्सको उपभोग गर्नेछ, तपाईंको मांसपेशिहरु को कोशिकाहरुमा ग्लियोकोजन को मात्रा मा बढायेगा यस प्रकार जिम मा तपाईंलाई अधिक ऊर्जा दिइन्छ। फलस्वरूप, तपाईं अतीतमा उठाउनु भन्दा ठूलो वजन उठाउन सक्षम हुनेछ। यो यस कारणको लागि कि बाडबाइल्डरहरू र एथलीटहरू जसले भूखको साथ संघर्षलाई सँधै बोल्डेनोन अन्डेलेनेटको लागि छनौट गर्दछ।
शक्तिले के आकारमा योगदान दिन्छ। प्रयास गर्नुहोस् र बलियो लाभहरू बेवास्ता गर्नुहोस् र तपाईलाई ध्यान दिनुहुनेछ कि तपाईंको मांसपेशिहरु सामूहिकमा पुग्न सक्दैनन् जुन तपाइँ तिनीहरूलाई हुन चाहानुहुन्छ।
बिरोधमा बडी बहालीमा प्रयोग गर्ने बोल्डेननोन मध्ये एक हो। यसले एक शक्तिलाई बढावा दिन्छ जुन विशेष रूपले अफिस योजनाको लागि धेरै फायदेमंद हुन्छ। यसको साथ सुन्दरता यो पनि एथलेटिक प्रदर्शन पनि बढाउँछ।
बलियो वृद्धिको साथ, तपाईं आफूलाई बिना सजावट गर्न सक्षम हुन सक्नुहुनेछ जस्तो लाग्छ कि तपाईलाई सजाय दिइन्छ। तपाईले पहिले नै बताउन सक्नुहुनेछ कि यो कस्तो परिणाम हुनेछ। थप प्रशिक्षण भनेको तपाईं अब ठूलो मांसपेशिहरु पाउनुहुन्छ।
काट्ने एक बडिडेनोन बडिबिल्डिङमा प्रयोग गर्दछ। यो बडिबिल्डरहरू र प्रतियोगिहरु बीचमा सामान्य छ जुन अतिरिक्त वसा संग दूर गर्न चाहानुहुन्छ र सकेसम्म चाँडै हेरौं।
Boldenone Undecylenate एक काटन स्टेरॉयड हो जुन दुबला मांसपेशी जन को एक उत्कृष्ट संरक्षक हो। एकपटक तपाईं कटाई चक्रमा लैजानुपर्छ कसरी जान्नुहुन्छ, तपाईं अचम्म लाग्नु हुनेछ कि तपाइँ कसरी सबै अवांछित चर्को गुमाउनु हुन्छ र तपाईंको मांसपेशिहरु अझै पनि प्रभावशाली छन्। तस्बिरहरू अघि र पछि तपाईंको Boldenone प्रमाण हुनेछ कि तपाईं एकदम फरक व्यक्ति हुनुहुन्छ।
शरीरको मोटो हराउन, तपाईंसँग एक क्यालोरी घाटा हुनुपर्छ। यसको मतलब तपाईंले उपभोग गर्नेहरू भन्दा बढी क्यालोरीहरू जलाउनु पर्छ। दुर्भाग्यवश, एक क्यालोरी घाटा तपाईं आफ्नो मांसपेशी ऊतक गुमाउन सक्छ रूपमा शरीर ऊर्जा मांग को पूरा गर्न को लागी प्रयास गर्दछ। राम्रो आहारले तपाईंलाई यो रक्षा गर्न सक्दछ, तर यसको आश्वासन नहुन सक्छ।
मांसपेशियों को खोने देखि बचने को लागि, तपाईं लाभ गर्न को लागि यति कडा संघर्ष गरेको छ; तपाईं लैजानुपर्छ। न केवल यो तपाईंको दुबला मांसपेशिहरु लाई हानि देखि बचाएगा तर यसको तपाईंको शरीर मा राम्रो कंडीशनिंग प्रभाव पनि छ।
धेरै बडी बहालीहरूले यसलाई काटेर चक्रको पछाडीको फन्टमा प्रयोग गर्दछ र दोस्रो आधाको समयमा रोकिएको छ किनकि यसले एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट हुन सक्छ।
Equipoise (Boldenone Undecylenate) साइकल
Equipoise बहुमुखीतामा हासिल हुन्छ किनकि तपाईले यसलाई एक्लै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा अन्यसँग सँगै स्टक गर्नुहोस् Anabolic Steroids। तपाईले रोज्नु भएको स्टेरॉइडले तपाइँलाई प्राप्त गर्न चाहानु भएकोमा निर्भर गर्दछ।
यस प्रकारको Equipoise चक्र को रूप मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:
शुरुआती चक्र-यदि तपाइँ पहिलो पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाईंले प्रति सप्ताह 300mg को 500mg टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टेट / साइप्रियोटेटको 400-XNUMXmg लिन्छ। शुरुवातको चक्र चौधौं हप्ताभन्दा बढीको लागि चलाउनुपर्छ। यस समयमा, कुनै पनि शुरुवात मा मांसपेशियों मा एक महत्वपूर्ण मात्रा को लाभ को एहसास गर्न सक्छ।
मध्यवर्ती स्तर- यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँ मध्यवर्ती स्तरको अनुभव पाउनुभयो र अझै पनि निश्चित छैन कि कसरी Equipoise चलाउन, यहाँ केही सुझावहरू छन्; साथ equipoise लिनुहोस् Dianabol 25mg को एक खुराक मा लगभग एक देखि चार हप्ता सम्म। Equipoise को लागि, खुट्टा थोड़ा हप्ता 400-600mg मा बढेको छ। यो चक्र चलाउने अधिकतम समय बारह हप्ता हो।
उन्नत स्तर- जो राम्रो अनुभव भएका छन् उनीहरूलाई 600mg प्रति हप्तामा बाह्र हप्ता भन्दा कम खुराकको बोल्डेनोन अन्सेलिनेरेट। Trenbolone Enanthate प्रति सप्ताह 400mg को खुट्टामा यसलाई स्टक गर्न सर्वोत्तम स्टेरॉइड हुन सक्छ।
Equipoise चक्र पनि एक लक्ष्यको अनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। यहाँ दुई कोटिहरू छन्;
एक चक्र चक्र यस्तो देख्न सक्छ;
Dianabol -30mg प्रति दिन 1 देखि हप्ता 8 बाट व्यवस्थापन गरिन्छ
Equipoise- 600mg प्रति हप्ता 1 देखि हप्ता 12 बाट प्रबन्धित।
चक्र चापको लागि Boldenone:
Winstrol-35mg प्रति दिन 1 देखि हप्ता 8 बाट प्रबन्ध गरिन्छ
Equipoise- 500mg प्रति हप्ता 1 देखि हप्ता 12 बाट प्रबन्धित
एउटा साधारण बोल्डेनोन र टेस्टोस्टेरोन चक्र यस्तो देखिन्छ;
यौगिक औषधिको खुराक अवधि
Equipoise 400mg / हप्ता 15 सप्ताह
टेस्टोस्टेरोन Enanthate 500mg / हप्ता 15weeks
यहाँ कसरी equipoise चलाउन अर्को सक्षम छ;
हप्ताको Turinabol Equipoise टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट Nolvadex
1 दैनिक 50mg 400mg साप्ताहिक 500mg साप्ताहिक
2 दैनिक 50mg 400mg साप्ताहिक 500mg साप्ताहिक
3 दैनिक 50mg 400mg साप्ताहिक 500mg साप्ताहिक
4 दैनिक 50mg 400mg साप्ताहिक 500mg साप्ताहिक
5 दैनिक 50mg 400mg साप्ताहिक 500mg साप्ताहिक
6 दैनिक 50mg 400mg साप्ताहिक 500mg साप्ताहिक
13 500mg साप्ताहिक दैनिक 20mg
14 500mg साप्ताहिक दैनिक 20mg
15 दैनिक 20mg
16 दैनिक 20mg
17 दैनिक 20mg
18 दैनिक 20mg
19 दैनिक 20mg
20 दैनिक 20mg
Equipoise (Boldenone Undecylenate) डोज़
डरावनी दुष्प्रभावबाट पीडित हुनको लागि, तपाइँलाई उचित दिशानिर्देशहरू पछ्याउन आवश्यक छ। उच्च खुराक तपाईंले लिनु भएकोमा सम्झनुहोस्, अधिक तपाई तपाईले एस्ट्रोजेनिक प्रभावबाट पीडित गर्नुहुनेछ। साथै, तपाईले उपयुक्त खुराक लिनु पर्दछ ताकि तपाईलाई फाइदामा छुट्न सक्नुहुन्न।
सामान्यतया, Boldenone अज्ञात खुराक प्रति सप्ताह 200-400 मिलीग्रामबाट पर्दछ। पुरुषहरु को लागि, 400mg को एक खुट्टा राम्रो तरिकाले सहन को लागी छ र कम से कम खुराक हो कि अधिकांश को लेने को लागि चुनछन। केहि 600mg को लागि जान्छ किनकी यो पनि राम्रो सहन सहनशीलता र उपकरणको साइड इफेक्टहरू व्यवस्थित छन्।
लैंगिक क्रियाकलापलाई ध्यान दिँदै, धेरै पुरुषहरूले आफैलाई व्यवस्थापन गर्छन् / प्रति हप्तामा एक इंजेक्शनको साथ व्यवस्थापन गर्छन्। Boldenone अज्ञात खुराक पनि दुई वा तीन सानो इंजेक्शनहरूमा विभाजित हुन सक्छ। लामो बोल्डेनोन अज्ञात आधा-जीवन बढी व्यवस्थित साइड इफेक्टको साथ अधिक इन्जेक्शन संस्करणको लागि अनुमति दिन्छ।
महिलाहरु को लागि, मानक Boldenone Undecylenate खुराक प्रति सप्ताह 50mg हो। यस खुराक संग, भाइरस दुर्लभ छ, तर यसको संवेदनशीलता व्यक्तिमा निर्भर हुनेछ। केहि महिलाहरु 75-100mg को खुराक बर्बर गर्न सक्छ, तर तपाईंलाई सल्लाह दिइन्छ कि यस्तो खुराक नगर्ने सम्मसम्म तपाईं आफ्नो शरीर 50mg साप्ताहिक रूपमा सहज भएको निश्चित हुनुहुन्न।
8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) पक्ष तपाईंलाई प्रभाव पार्छ'll जोगिन चाहानुहुन्छ
Equipoise को साइड इफेक्टहरू अन्य स्टेरियोड्सको कारणले कडा कठोर हुँदैनन्। ती व्यक्ति जसले राम्ररी सजिलै चलाउन कसरी जान्दछन्, कतिपय कुनै पनि साइड इफेक्टको द्रुत रूपमा शिकायत गर्दछ।
यद्यपि त्यहाँ रिपोर्टहरू छन् कि Boldenone अज्ञात को एस्ट्रोजेन मा परिवर्तित हुन सक्छ, यो असीमित हुन्छ। बोल्डेनोन बनाम डेका तुलना गर्दा एस्ट्रोजन गतिविधि कम हुन सक्छ, तर यो टेस्टोस्टेरोन को आधा छ।
साइड इफेक्टहरूको गम्भीरतालाई कम गर्न, तपाईंले सही खुट्टा लिनु पर्छ। तपाईं कम से कम खुराक संग सुरू गर्न र यसको शरीर समायोजन मा जान्छ को रूप मा बढ्न सक्छ। जब तपाइँ यो गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यो anabolic स्टेरॉयड तिर आफ्नो शरीरको संवेदनशीलतामा परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं खुट्टा वा कम खुट्टा सुँगुर जस्तै साइड इफेक्टहरू देख्नु हुन्छ भने मुख वा नाकको भित्र र रातो, हड्डीको दुखाइ, रक्तको उल्टो, असामान्य, गहिरो जीभ, नली, अनौठो वजन, गहिरो जिब्रो, असामान्य रङ रगत / कालो / कालो / हल्का रंगको पट्टाले चिकित्सा सहायता खोज्छ।
तपाईंको Equipoise चक्र को समयमा र पछि, तपाईं टेस्टोस्टेरोन दमन देखि पीडित हुन सक्छ। तपाईंको प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन मा कमी विभिन्न साइड इफेक्ट्स संग आउन सक्छ।
नर खरगोशमा गरेको अध्ययनमा, इन्स्पिपोइसले इंजेक्शन गर्दा महत्त्वपूर्ण प्रजनन क्षति विशेष गरी टेस्टोस्टेरोन दमन भयो। उनीहरूको टेस्टोस्टेरोन उत्पादनको कमी नै नहोला तर तिनीहरूको एस्ट्राइडोल स्तर पनि बढ्यो।
प्राय पुरुष पुरुष प्रयोगकर्ताहरु सीरम लेप्टिन एकाग्रता को कम स्तर देखि पीडित छ। एक टेस्टोस्टेरोन स्तरको पहिलो इंजेक्शन पछि नाटकीय रूपमा ड्रप गर्न सक्छ।
Equipoise तपाईंको असर गर्न सक्छ SEX जीवन नकारात्मक टेस्टोस्टेरोन दमन र एस्ट्रोजन प्रभुत्वको कारण यो आउँछ। यसले तपाइँको लिबडो कम गर्न सक्छ, र यौन सम्बन्धमा मूडमा समस्याहरू हुन सक्छ।
कहिलेकाहीँ, यो जुनेकोमास्टिया पनि मानिस स्तनको रूपमा चिनिन्छ, एउटा शर्त जुन तपाईंको आत्म-सम्मानलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा घटाउन सक्छ। कुनै मानिसले आफ्नी महिलालाई देख्न चाहँदैनन् कि उनीहरूले मांसपेशिहरु कठिन मांसपेशीको स्थानमा राखे।
घोडाहरू अझै पनि, तपाईंका अण्डाहरू सिक्न सक्थे, र यसले तपाईंलाई कम शुक्राणु गन्ती र आत्मविश्वासको कमी पनि हुनसक्छ। शंकु परीक्षणको साथ, तपाईं निश्चित हुन सक्छ कि बच्चाहरु असर एक संघर्ष हुन सक्छ।
ओली स्पटटी छाला
यो एक anabolic र एन्ड्रोजेनिक स्टेरॉइड हो किनकी, Boldenone तपाईंलाई मांसपेशी आकार र आकार जो तपाईंलाई सधैं चाहियो र आकार पनि मुँहासे र तेल छाला जस्तै नर विशेषताहरु मा जोड दिन सक्छ।
Equipoise ले छाला तेल उत्पादन बढाउँछ जुन अक्सर breakouts संग हुन्छ। प्रायः, मुर्गी अनुहार र पछाडि हुन्छ। दुर्भाग्यवश, तिनीहरूलाई कम गर्नको लागि अनुहारको धुलो प्रयोग गरी बेवास्ता हुन सक्छ किनभने मुँहासे शरीरमा एण्ड्रोनिकिक यौगिकहरूमा वृद्धि भएको हुन्छ।
गुर्दे र जिगर क्षति
Equipoise अंग क्षति हुन सक्छ, एक साइड प्रभाव को आकार, आकार, र एक गुर्दे को प्रकार्य मा विशेषता द्वारा विशेषता। यो पुरुष र महिला दुवै हुन्छ र यस तथ्यले योगदान गर्दछ कि यस स्टेरॉयड एण्ड्रोनिकिक हो।
जनावरहरूमा एक अध्ययनमा, माटो खरगोशले उपकरणको साथ व्यवस्थापन गरेको हेप्टिक (जिगर) र गुर्दे (गुर्दे) क्षतिको संकेत देखाइयो। एउटै मामला मानव हुन्छ, र यो जर्नल अफ स्पोर्ट्स, मेडिकल र शारीरिक स्वास्थ्यमा उपलब्ध अध्ययन द्वारा समर्थित हुन सक्छ।
महिलाहरूले पुरुष विशेषताहरू विकास गर्छन्
महिलाहरु लैजानुपर्छ भाइरसबाट पीडित हुन सक्छन्। के यो अर्थ भनेको हो कि तिनीहरूले सूचना दिन सक्छन् कि तिनीहरूले विशेषताहरु र सुविधाहरू विकास गर्न थालेका छन् जुन केवल पुरुषहरूमा मात्र हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि, तिनीहरू मांसपेशिहरु लाई प्राप्त गर्न सक्दछन् जुन उनीहरु खोज्दै छन् तर एकै समयमा अनुहारमा अनावश्यक बालों बढ्छ। महिलाहरू उनीहरूमाथि दाँत गर्दैनन्, र यो यस्तो बन्दै जान सक्छ।
यसमा थप गर्न, जो महिलाहरु लैजानुपर्छ मा आफ्नो महिला स्त्रीहरु मध्ये केहि गुमाउन सक्छन्, आक्रामकता बढेको छ र गहिरो आवाज पनि अनुभव गर्दछ।
कोलेस्ट्रॉलमा वृद्धि गर्नुहोस्
अन्य एनाबोलिक स्टेरियोड तुलनामा, Equipoise हृदय रोग प्रणाली मा एक कम प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न गर्दछ। तथापि, त्यहाँ एक कोलेस्ट्रोल स्तरमा नकारात्मक प्रभावबाट पीडितको एक मौका हो। अन्य अरोनोनिक स्टेरियोड्स जस्तै यो तपाईंको एचडीएल (राम्रो कोलेस्ट्रॉल) कम गर्न सक्छ र एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) लाई बढाउन सक्छ।
यसको विरोध गर्न, एक स्वस्थ आहार खाएर उचित पोषण देखाउनुहोस् र तपाईंको प्रशिक्षण कार्यक्रममा कार्डियो व्यायाम थप्नुहोस्।
Equipoise संग उठाउँदै तपाईंलाई हृदय रोगबाट ग्रस्त हुन सक्छ। यसको कारण यो कारणले यसको प्रयोग सम्भावित खतरनाक परिस्थितिहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ।
Equipoise पुरुष पैटर्न गम्भीरतालाई जोगाउन सक्छ र यसैले पीडित व्यक्तिहरूलाई कहिल्यै पनि पूर्वनिर्धारित बनाउँदछ।
स्टेरॉयड तरल को लागि Boldenone अज्ञात विधि को रूप मा निम्नानुसार छ
300mg को लागि EQ 100mg / मिलीलीटर पकावट
अंगूर तेल तेल 62.5ml
बेन्जिल बेन्जोजेट 10ML (10%)
बेंजिल रक्सी 2ml (2%)
Boldenone अज्ञात 30g (25.5ml)
Boldenone cypionate अविश्वसनीय एकको तुलनामा एक छोटा एस्टेरियर हो। Boldenone Cypionate आधा जीवन धेरै लामो छ र boldenone cypionate पत्ता लगाउन समय एक र आधा वर्ष सम्म पुग्न सक्छ। यसका कारण, बोल्डेनन साइप्रियोटेन्स खुसीले अधिक लगातार इंजेक्शनहरूमा प्रवेश गर्दछ। कुनै आश्चर्य छैन कि इंजेक्शनहरू मन नपर्ने बोल्डेनन साइप्रियोनेट स्टेरॉयड प्रयोग गर्दैन। एक साधारण Boldenone Cypionate खुराक प्रति एमएल 100-150mg को बीच हो।
Boldenone Cypionate स्टेरॉयड घोडाहरूको उपचार गर्न उनीहरूलाई वजनमा थप गर्न साथै तिनीहरूका कपाल कोट र सामान्य शारीरिक अवस्था सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Boldenone Acetate लोकप्रिय रूपमा छोटो अभिनय इक्विपोस के रूप मा जाना एक स्टेरॉयड है कि एक अलग एस्टर इसके साथ संलग्न है। यो प्राय: घोडा रेसिङमा प्रयोग गरिन्छ, तर शरीरका बासिन्दाहरूले यसलाई प्रेम गर्छन् Boldenone Acetate लाभ विशेष गरी दुबला मांसपेशियों मा माछा। Boldenone Acetate खुट्टा 400-800mg हो हप्तामा एक पटक।
Boldenone एसीटेट होमबrew नुस्खा (सूची)
Boldenone Acetate नुस्खा;
100ml @ 100mg / मिलीलीटर
18% बेंजिल बेन्जोजेट 18ml
2% बेंजिल रक्सी 2ml
Boldenone Cypionate नुस्खा समावेश गर्दछ;
50ml Boldenone Cypionate 200mg / मिलीलीटर
11ml बेंजिल बेंजोजा
1ml बेंजिल रक्सी
15ml अंगूर तेल
Boldenone कहाँ प्राप्त गर्ने?
एक बिल्डरबिल्डर वा खेलाडीको रूपमा, तपाईं सबै समयको खोजीमा हुनुहुन्छ जुन तपाईंको खेलको शीर्षमा हुनेछ। धेरै देशहरूमा, तथापि, को प्रयोग Anabolic Steroids निषेधित छ, र तपाइँ तिनीहरूलाई पहुँच गर्न कठिन हुन सक्छ। यद्यपि, तपाईं तिनीहरूलाई वैधानिक वेबसाइटबाट सजिलै पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। साथै अनलाइन किन्नुहोस् एक सहज खरीद प्रक्रिया सहित थप फाइदाहरू।
इन्टरनेटमा, तपाईं स्टेरइडमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं खरीद गर्न चाहनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यहाँ तपाईले Boldenone Acetate नुस्खा, Boldenone Cypionate गृहब्रावको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ, बोल्डेनोनको लागि के होईन र यसको बारेमा जान्न चाहानुहुन्छ केहि पनि। तपाईं यसलाई खरिद गर्न निर्णय गर्दा, तपाईं पहिले नै यसको प्रयोगमा सबै जानकारी संग सशस्त्र सशस्त्र हुनुहुन्छ। र तपाईंको लागि पनि तनाव-मुक्त बनाउन, यो सबै जानकारी तपाईंको घर वा कार्यालयको सान्त्वनामा उपलब्ध छ।
अनलाइन पसलहरू भौतिक पसलहरूको तुलनामा राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्छन्। Boldenone मूल्य अधिक किफायती अनलाइन हुनेछ किनभने तपाईं राम्रो सौदों प्राप्त गर्न सम्भव छ। साथै, तपाइँ थोक खरिदका लागि छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अतिरिक्त सिक्कामा बचत गर्न कसले प्रेम गर्दैन?
के तपाईलाई थाहा छ तपाइँ सबैको बारेमा जान्न बिना गुप्तनाम Boldenone किन सक्नुहुनेछ? इन्टरनेटमा, तपाईं धेरै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि धेरै प्रश्नहरू जोगिन को लागी हुन सक्छ केहि शर्मिला। केवल तपाईं र कम्पनीले तपाईंको प्याकेजमा के थाहा छ र अरू कसैलाई मांसपेशिहरु उछिनेछ।
यो बिक्रीको लागि Boldenone असाधारण गुण हो र तपाईंलाई निराश तुल्याउँदैन। यो अनियमित छ र तपाईंको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राख्ने छैन। AASraw एक वैध वेबसाइट हो जसले यसको उत्पादनहरू कला उपकरणको साथ निर्माण गर्दछ। तपाईलाई विश्वास गर्न सकिन्छ कि हाम्रो बिक्रीको बोल्डेननले तपाईंको इच्छित परिणाम प्रदान गर्नेछ।
तपाईं घोडाहरूका लागि सामान पनि खरीद गर्न चाहनुहुन्छ। आज यो खरिद गर्नुहोस्, र तपाईंको नली कहिल्यै खुशी हुनेछैन।
Equipoise (Boldenone Undecylenate इंजेक्शन) टेक्निकल बुलेटिन, पृष्ठ 1-9
स्टेरॉइड विश्लेषण, ह्यूग एलजे मकिन, डीबी गवर, पृष्ठ 815-823 द्वारा सम्पादन
खाद्यमा गैर-एंटिमेइक्रोबियल पशु चिकित्सा औषधि अवशिष्टहरूको रासायनिक विश्लेषण, जैक एफ द्वारा सम्पादन गरिएको। केन, जेम्स डी। म्याकनेल। जियान वांग, पृष्ठ 193
Masteron Enanthate The Longer Acting Androgenic Anabolic Steroid (AAS) 12 चरणहरूमा स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ता कसरी छनौट गर्ने?